Noqo macamiil | Swedbank
Ku soo dhawoow inaad macmiilkeena noqoto
Daqiiqado kooban gudahood macmiil ku noqo
Hel fursad akoon, bangi internet iyo adeeg telefoon shakhsi ahaaneed
Maanta bilow maaraynta dhaqaale-maalmeedkaaga
Macmiil ku noqo Mobilt BankID
Macmiil noqo adigoo adeegsanaya Mobilt BankID
Codsigu wuxuu ka kooban yahay afar talaabo, daqiiqado kooban ayaana lagu buuxinayaa. Waa inaad:
leedahay Mobilt BankID
buuxisay 18 sano
ku leedahay Iswiidhan lambar aqoonsi
ku leedahay Iswiidhan lambar telefoon gacan
Adeegyo bangi oo dheeraad ah
Markaad macmiil noqotid waxaad fursad u heleysaa akoon, adeegyo dijitaal ah iyo adeegeena telefoon. Taas ka dib waxaad soo dejisan kartaa appkeena iyo Swish, codsan kartaa amaah, bilaabi kartaa inaad lacag kaydsato iyo inaad heshiisyo caymis saxiixdo.
Su’aalo iyo jawaabo ku saabsan macmiil noqoshada
Sideen macmiil ku noqon karaa haddaanan lahayn wax Mobilt BankID?
Booqo mid ka mid ah xafiisyadeena si aan kaaga caawinno sidaad wax u bilaabi lahayd. Raadi xafiiska kuugu dhow adigoo qaanadda raadinta ee boggaan xaggiisa hoose ku qoraya magaca magaaladaada ama degmadaada.
Macmiil waan ka noqon kari waayay online. Sabab?
- Dhawaan ayaad Mobilt BankID u soo degsatay telefoonkaaga gacanta ama taabletkaaga. Booqo mid ka mid ah xafiisyadeena si aan kaaga caawinno sidaad wax u bilaabi lahayd. Raadi xafiiska kuugu dhow adigoo qaanadda raadinta ee boggaan xaggiisa hoose ku qoraya magaca magaaladaada ama degmadaada.
- Horaad u lahayd akoon HSB Bospar ah ama mid Swedbank ah. Halkii aad akoon cusub ka samaysan lahayd, webbka ku gal Mobilt BankID oo ka jawaab su’aalo kooban si aad fursad ugu hesho adeegyada dijitaalka ah iyo adeegeena telefoonka.
Lambar aqoonsi iswiidhish ah ma lihi, sideen macmiil ku noqdaa?
Si aad macmiilkeena u noqoto waa inaad lambar aqoonsi iswiidhish ah leedahay. Waa inaad booqato xafiis si aad aqoonsigaaga u sugto adigoo baasaboorkaaga muujinaya. Raadi xafiiska kuugu dhow adigoo qaanadda raadinta ee boggaan xaggiisa hoose ku qoraya magaca magaaladaada ama degmadaada.
Dalalka ka midka ah heshiiska Schengen iyana way khusaysaa muujinta kaar u dhigma kaarka aqoonsiga ee ka jira dalka Iswiidhan, kaas oo sheegaya dalka aad ka soo jeeddo. Marka aad muujinayso ID dal shisheeye, aqoonsiga waa in lagu xaqiijiyo dokumeenti dheeraad ah, sida ruqso deganaansho, caddayn shaqo, caddayn ka socota Hay’adda Canshuuraha ama caddayn iskuul-dhigasho.
Muxuu bangigu su’aalo ii weydiinayaa markaan codsanayo inaan macmiil noqdo?
Markaad online ahaan u codsato inaad macmiil noqoto, waxaan ku weydiineynaa su’aalo adiga kugu saabsan iyo sida aad adeegyadeena u isticmaali doonto. Sharciga Iswiidhan ayaa ina faraya inaan taas samayno si aan adiga iyo bangigaba uga ilaalino falal dembiyeedyada.
Sababaha uu bangigu su'aalaha kuu weydiinayo
Macmiil ka noqo Swedbank
Soo wac 0771-60 65 07 oo waxaan kaa caawimaynaa inaad online macmiil ku noqoto.